2020 Guide dhamaystiran Baaritaanka Admission Ilkaha [IT info]
Waa Maxay DAT ah?
Sidee Codso in aan qaado DAT ah?
Imisa Waxaa ma Qiimaha?
Ma Waxaa Assistance Financial Available Waayo DAT ah?
Markii aan Qaado karaa DAT ah?
Sidee Times badan oo aan ku Qaadataa karaa?
Waxaan ballan karaa Test My Taariikhda?
Sidee Long Ma DAT ah?
Baaxadda Waxyaabaha la daboolo On DAT ah
Survey of Sciences Dabiiciga ah (100 Su'aalaha)
Imtixaanka Awoodda garasho (90 su'aalo)
Reading fahamka Test (60 su'aalo)
Sabab taranta (40 su'aalo)
Ma isticmaali karaa warqad qoraal ama wax kale inta aad qaadanaysid imtixaanka?
Markii aan u heli karaa tirooyinka aan?
Sidee loo DAT dhaliyay?
The Test Admission Ilkaha, sidoo kale loo yaqaan DAT ah, waxaa imtixaanka Mudaysan badan-kala doorasho ay sameeyeen ururka dhakhaatiirta American ah (ADA). DAT qiyaasaa kartida tacliinta guud, fahamka macluumaadka cilmiyaysan, iyo awooda garasho ee examinee ah.
Codsadayaasha dugsiga ilkaha waxaa looga baahan yahay in ay qaataan DAT ee si aqbalo wax laga xoreeyo. dugsiga ilkaha. Inkastoo dhibcaha DAT aysan factor kaliya in dugsiyada ilkaha fiirso halka go'aaminta oo codsadayaasha in ay doortaan galay barnaamijka; waa mid ka mid, haddii aan inta badan ku, arrimo si dhib leh miisaan.
Dugsi kasta ilkaha wuxuu leeyahay shuruudo gaar ah oo ay ku jiraan dhibcaha DAT yar in codsadayaasha waa in ay kulmaan si ay u xitaa ku codsigaaga dib loo eego waraysi ugu yeedhi, iskaba daa aqbalo ah galay barnaamijka.
Haddii aad rabto in aad noqdo dhakhtarka ilkaha ka dibna aad u baahan tahay in ay si fiican u dhaliyo on DAT ah! Haddaba waan tegi doonaa iyada oo loo marayo baaritaanka oo idil, ka bilow ilaa iyo dhamaad, oo wuxuu u burburin idiin soo dejiyey, waayo, si aad u ogaato sida saxda ah waxa aad tahay ilaa ka gees ah.
Si aad u gasho DAT ah, aad u baahan tahay inaad oggolaansho Waaxda Adeegyada Imtixaanka ee ADA ka helaan. marka hore waxaad ka heli doontaa DENTPIN ka dibna soo gudbiyaan codsi, taas oo labada waxaa la samayn karaa laga bilaabo halkan.
Marka ogolaansho in ay qaataan DAT ah, waxa kaliya ee aad yeelan doontaa 6 bilood in ay ku qaadan! ma awoodi doontid inaad in la kordhiyo wakhtiga ama hesho lacag aad lacagta si loo xaqiijiyo in aad ka go'an oo diyaar u ah inay tagaan.
Kharashka hadda waa $415, taas oo ah lacag aan celis aan la iibin karin. Kharashka waxaa ka mid ah warbixinta dhibcaha rasmiga ah dhammaan dugsiyada aad ku qoran codsiga DAT aad (iyadoo aan loo eegin tirada), warbixin aan rasmi ahayn score soo saaray xarunta imtixaanka, iyo score rasmi ah u sheegin lataliyaha pre-ilkaha (haddii aad u dooratay Doorashadan on codsigaaga).
Waxaad updates dugsiyada aad loo xulay ee arjiga DAT aad ilaa iyo inta kuwa loo gudbiyay DTS ee ADA ka hor ballanta imtixaanka aad soo gudbin kartaa. Haddii ay aan la helin ka hor ka dibna waxaa laga qaadayaa lacag ah $34 per warbixinta in labada dugsi ilkaha ama qaataha kale soo diray.
ADA The ma bixiyaan kacafis lacagta qayb ahaan loogu talagalay ardayda in ay yihiin laga xoreeyo. muwaadiniinta ama shisheeyaha deggan oo heshay kaalmada maaliyadda ee uu machadka / iyada. daboolida laabashada 50% ujrada, laakiin ma daboosho kharashyada dheeraadka ah ee warbixinta dhibcaha wakhtiga codsiga hore ka dib. Examinees in ay hore u helay dhaafitaanka ujrada ama kuwa horay u qaaday DAT ee aan u qalmin dhaafida.
Lacag tanaasulid ayaa la mid aad u xadidan oo siiyey on a horeysay-yimaadaan, salaysan hore u adeegi jiray oo kaliya. In si ay u qalmaan inay helaan kacafis waa in aad soo gudbiso foomka macluumaad maaliyadeed ee lacagta dhaafitaanka, warqad dhameystirtay codsiga DAT aad, iyo warqada deeqda waxbarasho ee machadka. Waxaad codsan kartaa foomamka at [email protected]. Lacag tanaasulid waa in la codsadaa in qoraal ahaan iyo ma noqon doonto in aad xaq u-dhaafitaanka haddii aad soo gudbiso codsi DAT elektarooniga ah.
DAT waxaa maamula sannadka xarumaha imtixaanka ku shaqeeya by Prometric Incorporated. Marka ansixinta codsiga si aad u qaadato DAT ah, aad ayaa loo wargalin doonaa via email inay soo booqdaan Prometric ama la xiriir iyaga balan imtixaan ah.
Aad u leedahay in ugu yaraan sugto 90 maalmood ka dib markii DAT in ay dib u. waxaa looga baahan doonaa in aad soo gudbiso codsi cusub iyo ujrada bixin mar kale dib u qaadashada kasta. Haddii aad leedahay saddex ama ka badan isku day baaritaanka ka dibna waa inaad codsataa ogolaansho in ay imtixaan.
Codsiga baaritaan dheeraada waa in lagu soo gudbiyaa qoraal u ADA ee Waaxda Adeegyada Imtixaanka oo waa inay ku jiraan cadaymo muujinaya in aad loogu talagalay si aad u codsato in dugsiga ilkaha gudahood ugu dambeeyey 18 bilood. Evidence ka mid noqon kara:
Nuqul ka mid ah codsi dhammaan loo gudbiyey ADEA AADSAS
Warqad diidmada dugsiga ilkaha
Warqad ku saabsan warqadda dugsiga ka ah sarkaal ogolaanshaha dugsiga ilkaha dhiiri inaad imtixaan ama dib u codsato
Warqad ku saabsan warqadda dugsiga ka ah kulliyadda / jaamacadda taliyaha xirfadda caafimaadka / macallin la cadeeyo in aad u codsaneysid dugsi ilkaha
Haa aad awoodid; si kastaba ha ahaatee, waxaa looga baahan doonaa inaad bixiso lacag ah dib u dhigitaanka. wax fiican in la sameeyo waa soo qaado taariikhda iyo dheggan waxaa la! Si kastaba ha ahaatee, haddii ay jiraan wax uusan kor u yimaadaan oo aad u leeyihiin in ay ka dibna ballan halkan waa miis in kuu sheegi doonaa inta aad bixin doontaa.
Ka hor inta maalmood Imtixaanka Taariikhda
DAT waa imtixaan Mudaysan. Waxaad heli doontaa 4 saacadood oo 15 daqiiqo si loo dhammaystiro dhammaan qaybaha imtixaanka. Waxaa kaloo jira 45 daqiiqadood oo waqti dheeraad ah oo waa optional oo loo isticmaalo tutorial ah oo bilowga ah ee imtixaanka, nasasho barta kalabadhka, iyo baadhitaan ka dib markii uu tijaabada.
Waxaan aad ugu boorinayna lahaa qaadashada waqtiga la qoondeeyey inaad nasasho iyo siiso maskaxda inuu nasto ka hor inta sii on kula inta kale ee imtixaanka. Waa imtixaanka dulqaadasho ah, aad u baahan tahay in loo diyaar garoobo maskax ahaan iyo jidh. In badan oo aad u diyaariso iyada oo loo marayo waxbarashada, qaadata imtixaanada dhaqanka, cunidda cunto caafimaad leh iyo hurdo kugu filan; si fiican aad u samayn doonaa imtixaanka dhabta ah. Waxa kaliya sida cayaaraha, aad u baahan tahay si ay u tababaraan iyo diyaariyo dhammaan dhinacyada si ay u si fiican u qabtaan maalinta kulanka. dubbeyn Enough, halkan waa burburo waqtiga imtixaanka:
Imtixaanka Awoodda garasho
Reading fahamka Test
Imtixaanka Sabab u taranta
Ikhtiyaar Post Test Survey
DAT wuxuu ka kooban yahay afar imtixaan: Survey of Sciences Dabiiciga ah, Imtixaanka Awoodda garasho, Reading fahamka Test, oo Sabab u Test tiro ahaaneed a. In si ay u yaqaaniin wax ka, Sida xaqiiqada ah waxaad u baahan doontaa a DAT Prep Course. Bal aynu eegno imtixaan kasta oo la arko wixii qalab waxaa iyagii qariyey on.
Biology (40 su'aalo)
Cell iyo Biology kelli – asal ahaan nolosha, dheef-cell (oo ay ku jiraan photosynthesis / enzymology), hababka gacanta, thermodynamics, Qaab dhismeedka organelle iyo shaqada, maytosis / meiosis, qaab-dhismeedka gacanta iyo biology cell tijaabo ah
Diversity of Life: Biological Organization iyo Xidhiidhka ee Major Taxa (Lix-Kingdom, Saddex-Domain System) – plantae, animalia, protists, fangaska, eubacteria (bakteeriyada), archaea, iwm.
Qaab dhismeedka iyo Function of Systems – integumentary, lafaha, muruqa, wareegga dhiigga, difaaca, dheefshiidka, neefsashada, kaadida, dareemayaasha / kaskooda, hormoonada, taranka, iwm.
Biology Developmental – bacrinta, embryology sharaxaad, hababka horumarineed, iyo embryology tijaabo ah
Hidaha – genetics kelli, genetics aadanaha, genetics classical, genetics koromosoomyada, iyo technology hiddo
Evolution, Ecology, iyo Dhaqanka – doorashada dabiiciga ah, genetics dadka / speciation, cladistics, dadweynaha iyo bulshada ecology, lafaguro, iyo dhaqanka xoolaha (ay ka mid yihiin dhaqanka bulshada)
Chemistry Guud (30 su'aalo)
Stoichiometry iyo General Fikradaha – boqolkiiba Halabuurka, qaaciidooyinka taaban karo, isleegyo miisaamid, jiirarka iyo qaaciidooyinka kelli, mass gaws, cufnaanta, iyo xisaabaha ka isla'egyada isku dheeli tiran
gaasas – Aragti ogeed kelli of gaasas, Dalton ee, Boyle ee, Charles ee, iyo sharciga gaaska haboon
Cabitaanno iyo adkaha – ciidamada intermolecular, isbedel wajiga, cadaadiska uumiga, dhismayaasha, polarity, iyo guryaha
Solutions – polarity, guryaha (colligative, non-colligative), ciidamada, iyo xisaabinta fiirsashada
Acids iyo Saldhigyada – pH, xoog, reactions Bronsted-Lowry, iyo xisaabinta
Chemical Equilibria – kelli, acid / saldhig, roobab, xisaabaha, iyo Le Chatelier ee mabda'a
Thermodynamics iyo Thermochemistry – sharciyada thermodynamics, Law Hess ee, Ukaalmayn, enthalpies iyo entropies, iyo iibsiga kulaylka
Chemical Kinetics – sharciyada heerka, tamarta dardargelinta, iyo bar-nolosha
Xasaasiyada qayilo-Dhimista – isleegyo miisaamid, go'aan tirooyinka lagu qayilo, xisaabaha electrochemical, iyo fikradaha electrochemical iyo eraybixinta
Atoomikada iyo kelli Qaabdhismeedka – electron qaabeynta, noocyada orbital, jaantus Lewis-Dot, aragti qaaradda, aragti galmada, joomatariga kelli, noocyada bond, iyo qayb ka sub-qaaradda
Guryaha wakhtiyeysan – xubno ka wakiil, xubno ka kala guurka, isbeddellada periodic, iyo kimistari sharaxaad
Xasaasiyada nuclear – isleegyo miisaamid, tamar ku qabanaya, geeddi socodka suuska, Qurub, iyo eraybixinta
Laboratory – farsamooyinka aasaasiga ah, qalabka, falanqaynta baadi, ammaanka, iyo falanqaynta xogta
Chemistry organic (30 su'aalo)
Farsamo: Energetics, iyo Qaabdhismeedka – tirtiridda, Intaa waxaa dheer, free xagjirka ah, hababka la bedelay, iyo kuwa kale
Kiimikada iyo Physical Guryaha ee u taagoo – spectroscopy (1H NMR, 13C NMR, infrared, iyo multi-spectra), Qaab-dhismeedka (polarity, ciidamada intermolecular (milmi, barafku / dhibic karaya, iwm), iyo aragti shaybaarka iyo farsamooyinka (i.e. TLC, kala, iwm)
Stereochemistry (qiimeynta qaab-dhismeedka) – chirality, xiriirka isomer, iyo conformations
Magac- – xeerarka IUPAC iyo kooxaha functional in u taagoo
Xasaasiyada Individual ah Groups Major Functional iyo labanlaabayay of Xasaasiyada synthesize xeryahooda – alkene / alkyne, beduliyum, bedelay / tirtiridda, aldehyde / ketonka, acids carboxylic iyo taagayo, iyo kuwa kale. Waayo, kasta meesha kor ku xusan, soo socda-goobaha sub codsan: guud, hal-tallaabo, iyo multi-tallaabo.
Chemistry Acid-Base – darajeeyo ashitada / basicity (Falanqaynta qaab-dhismeedka iyo pH / falanqaynta xogta pKa), iyo saadaasha ee alaabta iyo equilibria
Iyo xabakta dhabta ah – Fikradda ah aromaticity, resonance, orbitals qaaradda / kelli, hybridization, iyo xaglaha bond / dhererka
The Imtixaanka Awoodda garasho wuxuu ka kooban yahay lix-hoosaadyo oo ka mid ah:
3D Development Form
The Reading fahamka Test ka kooban yahay saddex marinnada reading ku saabsan mawduucyo kala duwan oo cilmi ah. aqoon horey mawduucyada muhiim ma aha; Sidaa darteed, ujeeddada qaybtan waa in aad tijaabiso awoodaada akhrinta, fahmid, iyo falanqaynta macluumaadka cilmiyaysan ee aasaasiga ah. Time maraa degdeg ah marka aad isku dayaya in uu akhriyo, kuwaas oo aayadaha sayniska si aad si fiican u heli dhaqanka qaar ka mid ah in hore!
Baaritaankaan waxaa dabooli doonaa mawduucyada soo socda:
Algebra – isleegyo iyo tibaaxaha, sinaan, sal jibbaaranaha, qiimaha buuxda, saamiyada iyo Joogaba,, iyo falanqaynta garaafyada
xisaabaha tiro – jajabyada iyo jajab tobanle, boqolkiiba, qiyaasida, iyo qormo saynis
beddelaad – heerkulka, waqtiga, miisaanka, iyo fogaanta
Ixtimaalka iyo Statistics
Applied Xisaabta (Word) Dhibaatooyinka
A calculator afar shaqo aasaasiga ah shaashadda computer ah oo la shaqeeya la jiirka la heli karo si aad u doonaa qaybtan.
*Waxaa jiray warar sheegayay in Test QR la in la beddelo lahaa 2015 iyo in su'aalo ku saabsan xisaabaha tiro, beddelaad, jomitriya iyo tirignoomatari laga saari doonaa iyo bedelay su'aalo ku saabsan falanqaynta xogta waxgarasho, Marka la barbardhigo tirada iyo ixtimaalka iyo tirakoobka; laakiin sida ay Guide ADA DAT ee 2015 aan ahayn kiiska iyo imtixaanka u muuqataa mid ah sida format oo ka mid ah sanadihii hore. Waxaa laga yaabaa in isbedelka this dhici doona mustaqbalka, laakiin hadda ku format Test QR waa sida kor ku xusan.
Waxaa lagu siin doonaa laba loox note iyo laba tip calamado erasable wanaagsan in la isticmaalo ee imtixaanka. lama ogola in aad iyaga la leexiyo ama iyaga u xumeeyaan in si kasta. ayaa sidoo kale looma ogola in aad taaban shaashadda kormeeraha inta aad qaadanaysid imtixaanka. Waxaad isticmaali kartaa calculator afar shaqo aasaasiga ah oo kaliya on Test Sabab u tiro ahaaneed kuwaas oo la heli karo si aad u doonaa inta lagu guda jiro qaybta in kombiyuutarka iyo waxa la qalo doonaa jiirka.
Isla markiiba korkiisa dhamaystirka DAT aad heli doontaa war score aan rasmi ahayn ka Prometric Baaritaanka Xarunta. Dhibcaha Qiyaasta ayaa lagu soo waramayaa in warbixintan iyo waxa ay noqon doontaa warbixinta oo kaliya in aad shaqsi ahaan heli doontaa.
dhibcaha rasmiga ah ayaa laga heli doonaa saddex ilaa afar todobaad ka dib marka aad dhammaysato imtixaanka oo elektaroonig ah waxaa loo diri doonaa dugsiyada aad loo xulay ee arjiga DAT aad iyo sidoo kale in aad la taliyaha pre-ilkaha haddii aad u doonayay in ay helaan nuqul ka mid ah. All laga xoreeyo. dugsiyada ilkaha u baahan tahay warbixino rasmi ah score. The afar isku day imtixaanka ugu dambeeyay ayaa lagu soo waramayaa in ay iskuul kasta oo aad loo xulay ee arjiga DAT aad.
Dhibcaha Your ku salaysan yihiin tirada jawaabaha saxda ah; Sidaa darteed, aadan ciqaabi maleyso on su'aal. Ha ka tegin wax su'aalo ah oo bannaan!
Dhibcaha ayaa lagu soo waramayaa in dhibcaha qiyaasta, kuwaas oo innaba dhibcaha cayriin (jawaabaha saxda ah) mana boqolkiiba. Dhibcaha Qiyaasta dhigi suurto gal inay is barbar dhigaan dhibcaha mid examinee la tiro examinees oo dhan. Dhibcaha kala duwan DAT ka 1-30. Ma jiraan wax ku dhaco ama ku guuldareystay dhibcaha; score miisaanka of a 17 caadi ahaan waxay muujinaysaa qaab celcelis ahaan ku salaysan qaran.
imtixaan kasta waxaa ka mid ah su'aalo gaar ah in kaalin gaar ah gudahood barnaamijka imtixaanka. Su'aalahani waxay awood ADA in ay meel noocyada kala duwan ee imtixaanka on qiyaasta caadi ah cabiraada, oon ku qabsado foomamka wixii kala duwan ee heer dhib foomka. Sababtoo ah su'aalahan, Dhibcaha isku micno loo eegin qaab gaar ah oo la maamulo.
su'aalo kale waa tijaabo ku saabsan baaritaanka iyo kuwan aan la dhaliyay. xogta laga soo ururiyay su'aalo unscored waxaa dambe isticmaalaa in geedi socodka dhismaha imtixaanka, si loo hubiyo in su'aalahan ku haboon waxay ka hor waxaa ka mid ah ka mid ah su'aalaha soo dhaliyay.
Ka hor inta warbixino rasmi ah score lagu sii daayo, DTS ka qabtaan dib u eegista tayada dhammaan natiijooyinka si ah si loo xaqiijiyo sax dhibcaha. Waxay sidoo kale dib u eegi doona warar xarunta imtixaanka ee isdaba marin iyo xadgudubyada Regulations Test. In muddo ah 30 maalmood ka dib markii aad balan imtixaan, Barnaamijka DAT waa diyaar u ah inay baaritaan natiijada baaritaankaaga lacag ah $65 sameeyey bixinayo ADA.
Tani waxay kor u wuxuuuna burburka baaritaanka ilkaha gelitaanka ama DAT, waxaana rajeynayaa waxaa iska cad in aad waxa aad la kulmi doontaa maalinta imtixaanka. Inta badan macluumaadka waxaa loo sameeyey laga heli karaa ADA ee ay Test Admission Ilkaha (IN) 2015 Barnaamijka Guide oo laga heli karo halkan. Xusuusnow, fulinta iyo sidoo on DAT waa tallaabo muhiim ah in geeddi-socodka noqdo dhakhtarka ilkaha iyo helitaanka iskuulka ilkaha. Waa inaad u diyaargarowdaa oo si wanaagsan baad yeeli doonaa oo ugu dhaqsaha badan ay ogaadaan aad gool!
41 isticmaalaa maanta
38 isticmaalaa maanta
DAT Schedule Study
Kaplan DAT Discount Code Get $225 OFF In Person, Live Online, iyo Koorsooyinka Is-socod! Riix badhanka hoose oo soo geli Code Promo ee magalka.
Riix halkan inaad dalbato qiimo dhimis.